မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ရှိ်ဓမ္မမဟိဒ္ဓိ၊ဓမ္မသမ္ပတ္တိကျောင်းဆောင်Sound System <!-[if Webkit]> <!-[if Konq]> <!-[if Opera]> <!-[if FF]>
အကြောင်းအရာ။ သူတော်ကောင်း၊ သူမြတ်လောင်းများထံတွင် အသံပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းများအတွက် အလှူ ငွေ ခံယူခြင်း
မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်စာသင်တိုက်ကြီးသည် နှစ်စဉ် သံဃာပေါင်း ၃၀၀၀ ကျော် မွေးထုတ်ပေးနေသော အရေးပါလှသော စာသ်တိုက်ကြီးတခု ဖြစ်ပါသည်။
ပရိယတ္တိ ပညာရေးစနစ်သည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သဖြင့် စာသင်တိုက်ကြီးများကို မိမိတို့ တတ်အားသမျှ ဝိုင်းဝန်း ကူညီပံပိုးပေးခြင်းသည် မွန်မြတ်လှသော သာသနာပြုခြင်း တရပ် ဖြစ်ပါသည်။
မန္တလေးမြို့၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်သည် မြေဧက ၅ ဧကခန့် ကျယ်ဝန်း၍ စာသင်တိုက် ကျောင်းဆောင်ပေါင်း ၃၀ ခန့် တည်ရှိပါသည်။ ထို ၃၀ ခန့် ရှိသော ကျောင်ဆောင်များ အနက် အဓိက ကျသော ဓမ္မာစရိယ စာသင်သားများကို သင်ကြားပေးနေသော ဓမ္မမဟိဒ္ဓိ ကျောင်းဆောင်မှာ လေးထပ် ပါရှိပြီး တထပ်လျှင် အလျှား ပေ ၁၉၄၊ အနံ ၅၀ ပေ ကျယ်ဝန်း၍ စုစုပေါင်း ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း သံဃာတော် ၁၅၀၀ ခန့် နေ့စဉ် နံနက် မိုးသောက်မှ ည ၁၀ ခန့် အထိ ပရိယတ္တိစာပေများ သင်ကြား ပို့ ချ ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
ထို့နည်းတူ ဓမ္မပတ္ထိကျောင်းဆောင်သည်လည်း ၄ ထပ် ပါရှိပြီး တထပ်လျှင် အလျှား ၇၈ပေ၊ အနံ ၃၅ ပေ ကျယ်ဝန်း၍ စုစုပေါင်း ဓမ္မာစရိယ စာချတန်း သံဃာတော် ၇၀၀ ခန့် နေ့စဉ် နံနက် မိုးသောက်မှ ည ၁၀ ခန့် အထိ ပရိယတ္တိစာပေများ သင်ကြားပို့ချလျှက် ရှိပါသည်။
ထိုသို့သောကျောင်းဆောင်ကြီးများ၌ ဗုဒ္ဓဘာသာ၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သော ပရိယတ္တိစာပေများကို သင်ကြားပေးနေရာတွင် အထောက်အကူပြုပစ္စည်းအနက် အသံချဲ့စက်ပိုင်းဆိုင်ရာများသည် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင် ပါသည်။ ဤမျှ များပြားလှသော သံဃာတော်များကို တပြိုင်နက်ထဲ ထိရောက်စွာ သင်ကြားပို့ချနိုင်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော အသံချဲ့စက်များ လိုအပ်ပါသည်။ ယ္ခု လက်ရှိတပ်ဆင် အသုံးပြုနေသော အသံချဲ့စက်များသည် နှစ်ပေါင်း ၁၀ နှစ်ထက်မနဲ ကြာမြင့်နေသည်ကတကြောင်း၊ အသံချဲ့မှု မလုံလောက်သောကြောင့် စာပေသင်ကြးမှုကို သဲကွဲစွာ မကြားရမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသည်က တကြောင်း၊ စသော အကြောင်းတို့ကြောင့်၊ စက်များကို အသစ်တပ်ဆင်ရန် လိုအပ်လာပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ဓမ္မဒေါင်းလုပ် မိသားစုများမှ အဆိုပါ လိုအပ်ချက်ကို ဝိုင်းဝန်းဖြည့်ဆည်းရန် အသံချဲ့စက်များအတွက် အလှူများ ကောက်ခံလျှက် ရှိပါသည်။
အသံပိုင်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်များသည် အကြမ်းဖြင်းအားဖြင့် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၆၆၉၅ ခန့် ကုန်ကျမည် ဖြစ်ပြီး အလေးချိန်အားဖြင့် ၇၀၀ ကီလို ခန့် လေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
၁)ဓမ္မမဟိဒ္ဓိ လေးထပ်ကျောင်း ကြီး အတွက် အသံ စက်ပစ္စည်းများ တထပ်လျှင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၄၅၀၀
၂) ဓမ္မသမ္ပတ္တိကျောင်းကြီး အတွက် အသံ စက်ပစ္စည်းများ တထပ်လျှင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၂၅၀၀
၃) စပီကာ တလုံးလျှင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၁၄၀
၄) Amplifier တလုံးလျှင် စင်္ကာပူဒေါ်လာ၂၇၀၀
၅) မိမိတို့ သဒ္ဒါရှိသလောက်
စသည်ဖြင့် ကုန်ကျစရိတ်များ အတွက် သူတော်ကောင်း၊ သူမြတ်လောင်းများထံတွင် မိမိတို့ သဒ္ဒါရှိသလောက် ပါဝင် လှူဒါန်းကြပါရန် မေတ္တာ ရပ်ခံအပ်ပါသည်..
၁) စကာင်္ပူတွင်ရှိကြကုန်သော ဓမ္မမိတ်ဆွေ အပေါင်းတို့သည်.. အောက်ပါ DBS Saving Plus အကောင့်ထဲသို့ တိုက်ရိုက် လှုဒါန်းနိုင်ပါသည်...
DBS Saving Plus -
၂) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမှ ဓမ္မမိတ်ဆွေများသည် Paypal Account kyawlwin2000@gmail.com သို့ Send Money ဖြင့် ပေးပို့ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
၃) မြန်မာပြည်တွင်းမှ အလှူရှင်များသည် အောက်ပါ CB Bankသို့ ပေးပို့ လှူဒါန်းနိုင်ပါသည်။
ဘဏ်အမည်။ CB Bank - Sakura building branch
ဘဏ် အကောင့် နံပါတ်။ 0010600100080788
အလှူစာရင်းပြုစုရန်အတွက် အောက်ပါ အချက်အခက်များကို dhammadownload.admin@gmail.com သို့ email ပို့ပေးပါရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၂) လှုဒါန်းသည့် အကြောင်းအရာ (မစိုးရိမ်တိုက်သစ် အသံချဲ့စက်ပစ္စည်းများအတွက်)
လေယျဉ်ဖြင့် စက်ပစ္စည်များ စင်္ကာပူမှ မြန်မာသို့ သယ်ယူရန် ကီလို လှူဒါန်းရန်
အောက်ပါ အချက်အလက်များကို dhammadownload.admin@gmail.com သို့ email ပို့ပေးပါရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၂) လှုဒါန်းသည့် အကြောင်းအရာ (မစိုးရိမ်တိုက်သစ် အသံချဲ့စက်ပစ္စည်းများအတွက် ပေါင်ပို ကီလို အလှူဒါန)
၃) ဆက်သွယ်ရန် Mobile Phone
၅) ပြန်မည့် လေကြောင်းလိုင်းနှင့် အချိန်
၆) သယ်ယူပေးနိုင်သော ကီလို
အသံပိုင်းဆိုင်ရာ sound system အလှူရှင်များစာရင်း
MAI (Myanmar Airways International) မြန်မာ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေကြောင်း မှ စက်ပစ္စည်းများကို စင်္ကာပူ မြန်မာသို့ သယ်ယူရာတွင် လိုအပ်နေသော ပေါင်ချိန် ၃၀၀ ကီလို ကို လှူဒါန်းပါသည်။
၄၅ ။ Daw Mar Lar Aung & Son Ang Htoo Thant ၁၅-၁၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၄၄ ။ Ko Chit Ko Ko + Ma Zar Chi Oo (son)
Hein Htet Phyo and Hein Thant Nyi family ၁၄-၁၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၄၃ ။ Ko Min Htut Aung .Ma Hnin Wai Aung family ၁၁-၁၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀
၄၂ ။ U Htay Aung+ Daw Khin Khin Win ၆-၁၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၄၁ ။ ဒေါက်တာထွန်းအောင်+ဒေါက်တာမီမီကြိုင်၊ သား Jonathan Aung, (UK) ၅-၁၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၄၀ ။ U Soe Hla + Daw Khin Ma Ma Hyi, Daughter Khaing Soe Paing family, Mandalay ၅-၁၂-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၃၉ ။ U Zaw Moe Lwin, Sky Jet Group of Companies. Yangon, Myanmar. ၃၀-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀၀
၃၈ ။ ကို​ကျော်​စွာမြင့်​ + မခင်​ခင်​စု ဇနီး​မောင်​နှံမှ (၁ နှစ်ပြည့်​​မင်္ဂလာ နှစ်​ပတ်​လည်​အထိမ်းအမှတ်​) ၂၆-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၃၇ ။ ကိုခင်မောင်ဦး၊မခင်နီလာလှိုင် မိသားစု မှ ဓမ္မမဟိဒ္ဓိ လေးထပ်ကျောင်း စတုတ္တထပ်တွင်တပ်ဆင်မည့် Speaker 8 pairs အတွက် အလှုတော် ၂၃-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၈၈
၃၆ ။ (ဦးလှအောင်)+ဒေါ်နုနုကြည်၊ မဇာဇာဝင်း၊ မနှင်းနှင်းယု မိသားစု ၂၃-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၃၅ ။ ကိုကျော်ဝင်း ၁၆-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၃၄ ။ ဦးအောင်နိုင်ဦး+ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းတို့၏ သား မောင်အောင်မြင့်မိုရ်သော် မှ ဒီဇင်ဘာ ၅ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ၁၁ နှစ်မြောက် မွေးနေ့မင်္ဂလာအတွက် ၁၆-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၁၀
၃၃ ။ ဦးမောင်မောင်ကြိုင်၊ ဒေါက်တာ ဒေါ်လှမြင့် မိသားစု၊ အမှတ် ၁၆၊ ဇီဇဝါရိပ်သာ၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန် ၁၁-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၃၂ ။ ကိုရဲထွဋ် + မအေးသီတာ မိသားစု ၈-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၃၁ ။ U Chaw+ Daw Than Than Wai 's family ၇-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀၀
၃၀ ။ khin san oo ၆-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၂၉ ။ ကိုအောင်သူလင်း+ မခင်ဇီဇ၀ါ ၆-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၂၈ ။ Ko Lin Aung , Ma Thi Thi Moe and daughter Moe Rupar Lin ၅-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၂၇ ။ ဘိုးဘွား မိဘများအား ရည်စူးအမှုးထား၍ ကိုအောင်သင်း၊ မအေးငြိမ်းသူ၊ သား မောင်အောင်ကေင်းဆက် ၅-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၅၀
၂၆ ။ မစောစောခိုင် ၄-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၂၅ ။ ကိုကျော်ဆန်းမင်း+မသင်းသင်းယု ၃-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၂၄ ။ ဒေါက်တာမေကြည်စိုး ၂-၁၁-၂၀၁၄ ပေါင်စတာလင် ၁၅၀
၂၃ ။ နှစ်ဖက်သောမိဘများကို အမှူးထား၍ ဦးဇော်ဝင်းဆွေ + ဒေါက်တာအေးအေးမော်၊ သား မောင်ကျော်ဇော်ဟန်၊ သား မောင်ထက်မြတ်ဇော် မိသားစုမှ ဓမ္မသမ္ပတ္တိလေးထပ်ကျာင်း ၏ မြေညီထပ်အတွက် အသံကိုခြေပြုသော ပညာဒါန အလှူတော် ၂-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၅၀၀
၂၂ ။ ဖခင် ဦးလှသွင် နှင့် မိခင် ဒေါ်စန်းစန်းဝင်းတို့အား အမှူးထား၍ သမီး မစိုးသူဇာသွင် ၁-၁၁-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၂၁ ။ Kyaw Aung.(U.S.A.) ၁-၁၁-၂၀၁၄ ယူအက်ဒေါ်လာ ၁၀၀
၂၀ ။ မမြတ်မြတ် ၃၀-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၃၀
၁၉ ။ Min Swe + Theingi Ba, Son: Lu Maung Ba Oo Min ၃၀-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၅၀
၁၈ ။ Ma Khin Thida Myint ၃၀-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၁၇ ။ Kyaw Than Win + Su Su Aung, Son: Hein Htut Win, Daughters: Htet Htet Win, Su Su Aung ၂၉-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၁၆ ။ ဦးလှသွင်၊ ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း၊ သမီး ရွှန်းလဲ့လဲ့သွင် မိသားစု ၂၈-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၁၅ ။ ကိုသက်ခိုင်ဝင်း - မမေလဲ.နွယ် ၂၈-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၁၄ ။ ကိုကျော်မင်းသူ + မဟေမာကျော် မိသားစု ၂၈-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၁၃ ။ နှစ်ဖက်သောမိဘများကို အမှူးထား၍ ကိုသန့်ဇော်နိုင် နှင့် မနီတာခင်စိုး ၂၈-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၁၂ ။ ဦးလှအောင်-ဒေါ်ခင်သန်းနွယ် မိသားစု ၂၇-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀
၁၁ ။ ကိုသော်ဇင်မြင့်+ မမော်မော်ခိုင် ၂၇-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၁၀ ။ ကိုလှိုင်ဝင်း + မဌေးအိလွင် ၂၅-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၅၀
၉ ။ မခရေဝင်း ၂၅-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၈ ။ ဦးမောင်ဟန် + ဒေါ်အေးအေးဝင်း မိသားစု ၂၅-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀၀
၇ ။ ကိုခင်မောင်ကျော် + ဒေါက်တာနေကြည်မြင့် တို့၏ ၆ နှစ်မြောက် အထိမ်းအမှတ် ၂၅-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၆ ။ ကိုကျော်စွာလင်း + မကေခိုင် ၂၅-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၅ ။ ကွယ်လွန်သူမိခင်ကြီး ဒေါ်ခင်မူစိုး အားရည်စူး၍ မမိုးနန္ဒာ ၂၄-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀၀
၄ ။ ကိုဝင်းသိန်းထွန်း+မရွှေဇင်ထွန်း၊ (သား) ကျော်ဇေယျာထွန်း၊ (သမီး)ခင်ဖူးပြည့်ထွန်း မိသားစုမှ ၂၄-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၅၀
၃ ။ ကွယ်လွန်သူကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါး ဖြစ်သော်ဦးအေးမောင်.ဒေါ်မြသိန်း အားရည်စူးရ်ျ (ဒေါ်ခင်အုံးမြင့် ဦးဇော်ဝင်း ဦးသော်ဆန်း ဦးသော်ဆွေ ဒေါ်တင်မိုးလိူင် ဒေါ်တင်ဖြိုးဝေ)၊ သားသမီးမြေးမြစ်တစ်စု ၂၄-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၂ ။ Ko Tin Htun Saing & Ma Myint Myint Khaing family ၂၄-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၁၀၀
၁ ။ ကွယ်လွန်သူကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ သားသမီးမြေးမြစ်တစ်စု ၁၈-၁၀-၂၀၁၄ စင်ကာပူဒေါ်လာ ၂၀
စုစုပေါင်း အလှူခံ ရရှိငွေ - စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၉၇၂၈
စဉ် ။ ကုန်ကျစရိတ်များ
၁ ။ ဓမ္မမဟိဒ္ဓိ လေးထပ်ကျောင်း အတွက် Speaker, Amplifier, Mixer, Mic
ဒုတိယထပ် - Speaker - Yamaha - VSX5 (8 Pairs) S$2,088.24
တတိယထပ် - Speaker - Yamaha - VSX5 (8 Pairs) S$2,088.24
စတုတ္တထပ် - Speaker - Yamaha - VSX5 (8 Pairs) S$2,088.24
Power Amplifier- Yamaha XMV8280 (1 units) S$2,616.17
Wireless Mic - Audiotechnica (2 units) S$1,000.00
Mixer - Yamaha MG10XU (2 units) S$800.00
Cable (5 drum) S$1,560.00
Other Cost (1 lots) S$2,000.00
Sub-Total for ဓမ္မမဟိဒ္ဓိ လေးထပ်ကျောင်း ၊ S$15.238
၂ ။ ဓမ္မသမ္ပတ္တိ လေးထပ်ကျောင်း အတွက် Speaker, Amplifier, Mixer, Mic
ပထမထပ် - Speaker - Yamaha - VSX5 (3 Pairs) စင်ကာပူဒေါ်လာ S$ 783.09
ဒုတိယထပ် - Speaker - Yamaha - VSX5 (3 Pairs) စင်ကာပူဒေါ်လာ S$ 783.09
တတိယထပ် - Speaker - Yamaha - VSX5 (3 Pairs) စင်ကာပူဒေါ်လာ S$ 783.09
စတုတ္ထထပ် - Speaker - Yamaha - VSX5 (3 Pairs) စင်ကာပူဒေါ်လာ S$ 783.09
Power Amplifier- Yamaha XMV4280 (1 units) စင်ကာပူဒေါ်လာ S$1,765.70
Wireless Mic - Audiotechnica (1 units) စင်ကာပူဒေါ်လာ S$500.00
Mixer - Yamaha (1 units) စင်ကာပူဒေါ်လာ S$ 400.00
Cable (5 drum) စင်ကာပူဒေါ်လာ S$520.00
Other Cost (1 lots) စင်ကာပူဒေါ်လာ S$2,000.00
GST စင်ကာပူဒေါ်လာ S$582.26
Sub Total for ဓမ္မသမ္ပတ္တိကျောင်း စင်ကာပူဒေါ်လာ S$8,900.33
။ စုစုပေါင်း ကုန်ကျငွေ စင်ကာပူဒေါ်လာ 24,139.00
စုစုပေါင်း စင်္ကာပူဒေါ်လာ (ထပ်မံလိုအပ်သော အလှူငွေ) -၁၄၄၁၁
စဉ် ။ စက်ပစ္စည်း ၇၀၀ ကီလိုကို လေယာဉ် နှင့် စင်္ကာပူမှ မြန်မာသို့ သယ်ယူရန် ကီလို အလှူရှင်များ
၆ ။ Alex Liu Aung Kyaw ဒီဇင်ဘာလ ကီလို ၃၀
၅ ။ MAI (Myanmar Airways International) ကီလို ၃၀၀
၄ ။ ဦးအောင်နိုင်ဦး + ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း နိုဝင်ဘာလ ကီလို ၅၀
၃ ။ ကိုဟိန်းမင်းဋ္ဌေး ဒီဇင်ဘာလ ကီလို ၃၀
၂ ။ ဦးဝင်းဆွေ + ဒေါ်မြရင် မိဘနှစ်ပါး အမှုးထားပြီး သမီး ခင်ငြိမ်းချမ်းဆွေ ဒီဇင်ဘာလ ကီလို ၄၀
၁ ။ ဦးဟန်ကီ + ဒေါ်မြကြူ မိသား စု ဒီဇင်ဘာလ ကီလို ၆၀
စုစုပေါင်း ကီလို ၅၁၀
စုစုပေါင်း ထပ်မံ လိုအပ်နေသော ကီလို ၉၀